ICercedilla, indawo okuyiwa kuyo eduze naseMadrid | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Impelasonto, Madrid
Budebuduze neMadrid kunedolobha lase UCercedilla, isayithi elidume nge- ezokuvakasha ezintabeni ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX. Abahloli bamazwe bafika lapha ngezindlela ezintsha zokuhamba, ngokushesha, ngomsindo othile kepha ngempumelelo: isitimela.
Abavakashi bakuleso sikhathi bafika lapha beqa kafushane enhlokodolobha bezothokozela ubuhle bendawo, umoya ohlanzekile, iqhwa ebusika nelanga ehlobo. Kusuka lapho ICercedilla iyindawo yokuzilibazisa.
2 Ukuvakasha kweCercedilla
KuseSierra de Guadarrama, uhla lwentaba engaphakathi enhlonhlweni yase-Iberia engamakhilomitha angaba ngu-80 ubude nokuphakama okungaphezulu kwamamitha angama-2428. Ihlukanisa umcengezi waseDuero kusukela emgodini waseTagus.
UCercedilla Cishe ngamakhilomitha angama-57 ukusuka eMadrid ngakho-ke ingeyomphakathi ozimele waseMadrid. Itholakala endaweni ephakeme ngamamitha ayi-1188 futhi inokuxhumana okuhle namadolobha azungezile. Ukusuka eMadrid, isibonelo, olayini bamabhasi u-684 no-685 bakushiya lapha, futhi inethiwekhi yabagibeli be-RENFE nayo ikushiya ngomugqa C8b.
UCercedilla Inamakhilomitha-skwele angama-40 kuphela negumbi labantu abangaba ngu-6.700 XNUMX lapha. Phakathi kwengcebo yayo kukhona eminye esukela ezikhathini zamaRoma kepha ngokuyisisekelo iyindawo yezivakashi ezintabeni futhi izakhiwo zayo eziyizifanekiselo ezisukela ekhulwini le-XNUMX leminyaka.
La Umgwaqo waseRoma waseFuenfría Kuyingxenye yomzila oxhume iSegovia nge I-Miacum, ewela iSierra de Guadarrama edabula isiGodi saseFuenfría, itheku laso kanye neValsaín Valley. UPhilip V wayiguqula kancane ngo-1722 kepha izinsuku zokuqala kusukela ngesikhathi sika-Emperor Vespasian, phakathi kuka-69 no-79 BC.
El itheku laseFuenfría Kuyindlela yokudlula ezintabeni ewela izintaba futhi ixhuma iSegovia neMadrid. Inokuphakama kwamamitha ayi-1796 futhi iphakathi kweSierra de La Mujer Muerta neSiete Picos. Yenziwe ngamaRoma njengendlela yokuxhumana futhi namuhla inakho kuphela ukusetshenziswa kwezemidlalo. Kusethekwini lapho liwela khona umgwaqo omdala waseRoma, umzila wehlathi laseLa Calle Alta, iCarretera de la República kanye nemizila ekhuphuka izintaba.
El Isigodi saseFuenfría Kungaphakathi kweCercedilla, kungumngcele wemvelo weSegovia. Iqondiswe kusuka enyakatho iye eningizimu futhi inobude obungaphezulu noma ngaphansi kwamakhilomitha ayisithupha ngobubanzi bamamitha amabili nohhafu. Iweliswa yimifudlana eminingi, kepha okubaluleke kakhulu yi-Arroyo de la Venta, ewele ngokulandelana ngamathathu amabhuloho avela e-romannoma. Kukhona uhlaza oluningi, amahlathi aluhlaza okaphayini, ngokwesibonelo.
Ngaphezulu sibiza igama elithi IRepublic Highway, obizwa nangokuthi uCarretera Puricelli. Kungumkhondo wehlathi ongowaseCercedilla: uqala endaweni yokuzilibazisa eLas Dehesas bese uya ethekwini laseFuenfría. Uma ufuna eyodwa, qhubeka kancane kancane ekugcineni kwayo kwangempela, isisekelo seLa Peñota. Lo mzila isukela eminyakeni yama-30s yekhulu le-XNUMXX futhi ngenkathi kwakhiwa umqondo kwakuwukuhlanganisa uCercedilla noValsaín, kepha ngesikhathi seRiphabhulikhi Yesibili bamiswa ngenxa yombhikisho wabezemvelo.
Ngemuva kwalokho, umgwaqo obabazekayo washiywa emzileni olula ongagandayiwe wehlathi namuhla omatasa kakhulu ngawo abahamba ngezinyawo namabhayisikili. Aligandayiwe kodwa liqinile futhi linokuthambekela okuncane ngakho abagibeli bamabhayisikili bazolashwa. Yini enye, kunemibono eminingi futhi kubo unemibono emikhulu yesigodi. Isibonelo, yena Umbono kaVicente Aleixandre noma i Umbono kaLuis Rosales futhi i UMirador de la Reina, ngombono omuhle we-panoramic.
I-Las IDehesas de Cercedilla yindawo yokuzilibazisa, indawo ekahle yokujabulela ihlathi likaphayini. Kuyathandwa kakhulu ngabakhileyo edolobheni kanye nendawo yonke, ngisho nabantu baseMadrid abavela enhlokodolobha. Yindawo enhle ngempela ukuhamba ngomgwaqo waseRoma, unqamula phakathi kophayini basendle, ugibele ibhayisikili, uhlale isikhashana ezindaweni zokubuka, vakashela ipaki ye-adventure, i-Eco Park, noma uzipholele amachibi emvelo, ukugwedla, ukukhwela ...
Kulo nyaka i Amachibi emvelo eCercedilla zivulwa kusukela ngoMsombuluko kuya ngeSonto kusukela ngo-10 ekuseni kuye ku-8 ebusuku. Izinkulungwane zabantu ziyangena kodwa izilwane azivunyelwe. Amanzi amachibi AbakwaBerceas Ivela emifudlaneni esendaweni futhi ilashelwa amachibi. Uma ungenayo imoto, ungahamba ngebhasi lezokuvakasha lasehholo ledolobha laseCercedilla elikusa eLas Berceas, kodwa kuphela ngezimpelasonto nangamaholide. Ukungena kungama-euro ayisithupha ngomuntu omdala kanye no-6 ngezimpelasonto. Kukhona omanyolo.
Phakathi kwayo yonke into ezungeze lapha awukwazi ukuphuthelwa i- Ishawa yaseJalimane, impophoma efihlwe endaweni emaphakathi ne-sierra, e-Fuenfría Valley. Ingamamitha amabili ukuphakama futhi ingeyomfudlana iNavazuela. Incane, yebo, kodwa inhle ngoba izungezwe ihlathi elihle likaphayini. Ufika lapha ngokulandela umgwaqo waseRoma ngemuva kokuhamba imizuzu engama-45, ushiya iDehesa de Cercedilla. Kubhale phansi.
Ngaphandle kokuhamba noma ukuhamba ngebhayisikili ungakhuphuka futhi Ujantshi kagesi waseGuadarrama. Lesi sitimela esincane sihamba ngobuso baseningizimu beSiete Picos sijoyina iCercedilla nePuerto de Navacerrada, sidlule umhubhe sifike ePuerto de Cotos. Akuyona enye ngaphandle komugqa we-C-9 weCercanías Madrid futhi uyi-purely isivakashi Akukho ngqo eCercedilla, kepha kusondele kakhulu.
Ngaphezu kwalezi zindawo zemvelo zabavakashi ungavakashela i- ukuzalwa kweSanta María okuvela ngekhulu le-XNUMX, i- ISonto Lethu LikaCarmen, lelo laseSan Sebastián noma lelo le- I-Nuestra Señora de las Nlings okuvela ngekhulu le-XNUMX. Kukhona nedlanzana lamabhuloho edolobheni, amahle ukuwabona, insimbi endala ethiwa yi-El Potro nemithombo embalwa.
Ekugcineni, ngokuya ngesikhathi sonyaka ohamba ngaso, uCercedilla unakho amasiko nemikhosi ethandwayo njengemikhosi yokuzalwa kukaNkosikazi wethu, egcina izinsuku ezinhlanu, iMikhosi yaseSan Sebastián ngoJanuwari 20, iSonto eliNgcwele noma i-Aurrulanque Festival ewela kulezi zinsuku, ekupheleni kukaJulayi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Madrid » ICercedilla, indawo okuyiwa kuyo ngaseMadrid